10 notepad trick
Myanmar IT Resource Forum » PROGRAMMERS ZONE » » Batch File Programming » 10 notepad trick
1 10 notepad trick on 22nd February 2010, 12:40 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 265
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-02-11
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 407
ခေါင်းစဉ် နဲ့တော့သိပ်မကိုက်ဘူးဗျ.. bat file programming မှာ Note pad အကြောင်းလာရေးတယ်ပေါ့ဗျာ..
10 notepad tricks
Toggle your friend's Caps Lock button simultaneously:
Continuously pop out your friend's CD Drive. If he / she has more than one, it pops out all of them!
Hack your friend's keyboard and make him type "You areafool" simultaneously:
Open Notepad, slowly type "Hello, how are you? I am good thanks" and freak your friend out:
Frustrate your friend by making this VBScript hit Backspace simultaneously:
Convey your friendalil' message and shut down his / her computer:
Open Notepad continually in your friend's computer:
Hard prank: Pick your poison batch file. It asks your friend to chooseanumber between 1-5 and then doesacertain action:
2 Re: 10 notepad trick on 22nd February 2010, 5:06 pm
Some of your codes are .vbs not .bat bro.
3 Re: 10 notepad trick on 30th March 2010, 12:17 pm
yeah and some paths are broken.
4 Re: 10 notepad trick on 31st March 2010, 9:30 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-12-19
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 16
ကျွန်တော် တစ်ခုမေး မယ်နော်. .. bat file နဲ့ကျွန်တော် ပေးချက်တဲ location တစ်ခုမှာ autorun.inf ကို auto ပေးရေးချင်တယ် အဲဒါဘယ်လို ရေးရမှလဲ ဟင်.
ဆိုလိုချင်တာ က bat file ကို click လိုက်တာ နဲ့ autorun.inf ဖိုင်ထွက်လာတာကိုပြောတာပေါ့ဗျား..
5 Re: 10 notepad trick on 1st April 2010, 10:50 am
မသိပဲနဲ့ ဝင်ရွှီးလိုက်မယ် နော် လွယ်လွယ်လေးကို
ဒါက autorun တည်ဆောက်ပုံလေးပါ။
autorun လုပ်ပြီးတစ်နေရာမှာသိမ်းလိုက်.ဥပမာ။ ။C: or E: တစ်ခုခုပေါ့
ပြီးရင် notepad ထဲမှာ
start C:\_autorun.inf or
လို့ ရေးပြီး ဖိုင်ကို .bat နဲ့ သိမ်းလိုက်ရပြီ..
ပြီးရင် သိမ်းထားတဲ့ bat file ကို double click နဲ့ ဖွင့်ကြည့်
6 Re: 10 notepad trick on 1st April 2010, 9:03 pm
ကျေးဇူးပါပဲဗျား ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက အဲလိုမဟုတ်ဘူး အစ်ကိုရေး bat နဲ့ autorun.inf ကို created လုပ်တာကိုပြောတာ တစ်နေရာမှာဖွက်စရာမလိုပဲနဲ့ bat file ကို click လိုက်တာ နဲ့ autorun.inf ဖိုင်ထွက်လာတာကို ပြောတာဗျ့ ဆိုလိုတာက autorun ကို created လုပ်တဲ့ ကုတ်ပေါ့ဗျ့
7 Re: 10 notepad trick on 2nd April 2010, 8:06 am
အော်တိုရမ်း ကို Creat လုပ်ချင်တာဆိုလဲ ကျနော်ပေးတဲ့ လင့်ခ် မှာ ရှာကြည့်လို့ ရတယ်
အော်တိုရမ်းဖိုင် တည်ဆောက်တဲ့ ကုဒ်တွေ ရှင်းပြထားပါတယ်။
8 Re: 10 notepad trick